Konke odinga ukukwazi ngamamephu emvula | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Emhlabeni wezulu, amamephu abonisa izimo zemimoya, iziphepho, ama-anticyclone, njll., Abaluleke kakhulu. Ukuze ukwazi ukubikezela isimo sezulu. Amamephu wesimo sezulu awalutho ngaphandle kokumelwa kwezithombe okusisiza ukuba sazi amanani okuhlukahluka okuthile kwesimo sezulu kunendawo ethile yezwe. Phakathi kwabo bonke abezimo zezulu basebenzisa la mabalazwe, ngoba ukusetshenziswa kwawo kunikeza ulwazi oluningi nesithombe esithandekayo ngazo zonke izimo esingazithola emkhathini.
Kulokhu sizokhuluma ngemephu yezulu noma yemvula. Ngabe uyafuna ukwazi ukuthi lawa mabalazwe asebenza kanjani nokuthi asiza kanjani ukubikezela isimo sezulu?
1 Ukuhlukahluka kwesimo sezulu
2 Amamephu emvula nezimpi
3 Amanye amamephu emvula
4 I-NASA kanye nemephu yemvula yomhlaba
Ukuhlukahluka kwesimo sezulu
Ukuthola ukuthi isimo sezulu sizoba njani ngosuku olulandelayo, izazi zezulu zihlola ezinye zezimo zezulu ezibaluleke kakhulu ezinikeza imininingwane eminingi ngomkhathi. Okunye okuguqukayo okunikeza imininingwane eminingi ingcindezi yasemkhathini. Ebusweni bomhlaba, ingcindezi yasemkhathini iboniswa ebalazweni le-isobar. Ama-isobars yimigqa lapho ingcindezi yasemkhathini ifana khona. Ngakho-ke, emabalazweni lapho kungabonwa khona ama-isobars ahlukaniswe kabanzi, kuzosho isimo sezulu esihle nokusimama komkhathi.
Ngakolunye uhlangothi, uma imephu ye-isobar inemigqa eminingi ndawonye, kusho ukuthi isiphepho noma isiphepho sisondela. Kepha kuvela umbuzo kukho konke lokhu, kungani imigqa enengcindezi elinganayo yomkhathi ikhombisa ukuthi isiphepho sisondela? Ubudlelwano phakathi kwengcindezi yasemkhathini nethuba lemvula bunje. Lapho ama-isobar eseduze kakhulu, kukhula ngamandla lapho umoya uvunguza futhi, ngakho-ke, kuzoba khona ukungazinzi komoya okwengeziwe. Lokhu kungazinzi kungadala imvula njengoba sizobona ngokuhamba kwesikhathi.
Ngemigqa ye-isobar kungenzeka futhi ukwazi ukuthi umoya ozayo uzobafudumele, ube manzi, uma uvela ePoleni noma uma uvela ezwenikazi. Uma ebalazweni le-isobar sithola indawo lapho umfutho womoya uphakeme khona, kubekwa u- "A" futhi kusho ukuthi kune-anticyclone. Le yindawo yokuzinza okukhulu komkhathi, ngoba ukuhamba komoya kwehla futhi gwema ukwakheka kobumnyama. Ngakho-ke, kulolu hlobo lwesimo kunzima kakhulu ukuthi lina.
Ngokuphambene nalokho, uma ingcindezi iqala ukwehla, lapho inani lifinyelela ubuncane kuzobekwa u- "B" futhi kuthiwe kukhona indawo yengcindezi ephansi. Kulokhu kuzoba khona ukungazinzi komkhathi okukhulu futhi kuzoba nemibandela eminingi yokuthi imvula ibe khona. Lapho indawo yengcindezi ephansi ihambisana nesimo sezulu esine kakhulu kanye nomoya onamandla ngokwengeziwe, ibizwa nge-squall.
Amamephu emvula nezimpi
Kumamephu emvula izingqinamba nazo ziyakhonjiswa akhiwa lapho izindimbane zomoya, zombili ezibandayo nezifudumele, zihlangana futhi zidale imvula enamandla. ENyakatho Nenkabazwe, ku-anticyclone, umoya ujika ulandele ama-isobars ngokwewashi nangokuthambekela kokusuka esikhungweni. Kufanele sikhumbule ukuthi umoya uzohlala uthuthela ezindaweni lapho kunengcindezi encane yomkhathi.
Ngakolunye uhlangothi, endaweni yengcindezi ephansi, umoya uhamba ngokuphikisana newashi futhi iya maphakathi nengcindezi ephansi.
Lapho sifuna ukumela izingqimba kumamephu emvula, ama-isobars asetshenziselwa ukukhomba indlela nokuthi ingaphambili lifudumele noma liyabanda. Izimpi ezibandayo zimelwe ngonxantathu abancane futhi abafudumele ngamasentimitha ihlanganiswe umugqa ohlanganisa sonke isifunda esizohlala ngaphambili.
Ingaphambili alilutho ngaphandle nje kwendawo enkulu yokungazinzi komkhathi lapho kuhlangana khona izindimbane zomoya ezisemazingeni okushisa ahlukene. Uma umoya obandayo ufinyelela endaweni lapho izinga lokushisa liphakeme khona, kubanda phambili. Uma lokhu kwenzeka, amazinga okushisa ajwayelekile ehla futhi imvula ivame ukwenzeka ngesimo semvula noma iqhwa. Ngokuphambene nalokho, uma ubukhulu bomoya bufinyelela endaweni enezinga lokushisa eliphakeme, kuzokwakhiwa indawo efudumele yangaphambili. Kulokhu, kuzoguqubala futhi, kepha amazinga okushisa azoba mancane futhi nemvula izoncipha.
Amanye amamephu emvula
Ukuthola kahle isimo sezulu, izazi zezulu azikwazi ukubheka kuphela amamephu we-isobar, kepha futhi zibheka nezinye izinto eziguqukayo zezulu. Isibonelo, ezinye izinhlobo zamamephu ezisetshenzisiwe yilezo zesikhathi ukuphakama, okuthiwa ama-isohipsas noma amamephu we-geopotential. Isohipsas yimigqa exhuma amaphuzu atholakala ebangeni elifanayo futhi asezingeni elithile lengcindezi yasemkhathini. Le migqa ihlobene kakhulu nezinga lokushisa komoya ezingqimbeni zomkhathi. Cishe ngamamitha ayi-5.000 500 wokuphakama, ingcindezi yasemkhathini ingu-XNUMX hPa.
Njengoba kushiwo kwezinye izikhathi, umoya ofudumele, ukuba mncane kakhulu kuvame ukukhuphuka. Uma lokhu kwenzeka futhi ezingxenyeni eziphakeme kakhulu zasemkhathini kuhlangana nomoya obandayo kakhulu, ukunyakaza komoya okuqondile kuyokwenzeka okuzodala izimo zokungazinzile okungaba khona imvula.
Lezi zimo zokungazinzi komkhathi zenzeka lapho imephu ye-isohipsas ibonisa umkhombe noma amanani aphansi we-geopotential. Ngakolunye uhlangothi, uma amanani we-geopotential ephakeme futhi ama-isohipsas yakha umqolo, Kuyisimo lapho umoya ophakeme usezingeni eliphakeme lokushisa futhi, ngakho-ke, isimo sezulu sisimamise ngokwedlulele futhi bekungeke kwenzeke ukuthi kube khona imvula.
I-NASA kanye nemephu yemvula yomhlaba
Ngo-2015, i-NASA yakhipha imephu yemvula yomhlaba evuselelwa njalo emahoreni amathathu futhi ikhombisa wonke umbuso wemvula emhlabeni wonke nangesikhathi sangempela. Le mephu yemvula ivumela ososayensi ukuthi baqonde kangcono ukuthi izivunguvungu nomoya zihamba kanjani kuzo zonke izindawo zomhlaba.
Nasi isigaba esincane sendlela imephu yemvula yeNASA esebenza ngayo:
Njengoba ukwazi ukubona, amamephu emvula ayingxenye ebaluleke kakhulu ekubikezeleni isimo sezulu ku-meteorology.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Amamephu emvula
I-Onofre Pastrana Ortiz kusho
Sawubona, sawubona Germán Protillo, ngithole umnikelo wakho ku-Rain Maps ubaluleke kakhulu, umbuzo wami uthi: Kukuphi okuguquguqukayo lapho kungakuhle kakhulu ukufunda ingcindezi yasemkhathini (ama-hectopascals noma ama-millibars). Jabulela
Phendula ku-Onofre Pastrana Ortiz
Sawubona, isilinganiso esetshenziswa kakhulu ngabezulu nabezazi zemvelo yileso sama-millibar.
Ngiyabonga kakhulu ngokuphawula kwakho, imikhonzo!